Client Showcase: Bagan Htate Htar Hotel - Zeagwat, Inc.
Client Showcase: Bagan Htate Htar Hotel
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အားလပ်ရက်တွေမှာ ခရီးထွက်ပြီးအပန်းဖြေချင်ကြတယ်…တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သာပုဂံကိုသွားဖို့ရွေးချယ်ဖြစ်ရင်တော့ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းပြီးသန့်ရှင်းသပ်ရပ် သားနားတဲ့ Bagan Htate Htar Hotel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
စက်ဘီး နဲ့ လျှပ်စစ်စက်ဘီး ၀န်ဆောင်မှုများ
၂၄နာရီလုံခြုံရေး နှင့် Reception ၀န်ဆောင်မှုများ
အငှားကား၀န်ဆောင်မှုများအပြင် အခြားသောအသေးစိတ် ၀န်ဆောင်မှုများကိုလည်းစိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့သာ စောစောထတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိ ရင် Roof Top ပေါ်ကဖြတ် ပြန်သွားတဲ့ မိုးပြန်ဘောလုံးတွေရဲ့ အလှတရားကိုလည်းငေးလို့ရပါသေးတယ်။
ဒီလောက်အဖက်ဖက်က ကောင်းမွန်နေလို့ စျေးကြီးမှာပဲလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်း များသာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမည်မချိန်မတွင်းမှာရေကူးကန်ပါ ပါလာတော့မှာပါ။
Bagan Htete Htar Hotel ကတော့ပုဂံမြို့သစ်မှာတည်ရှိပါတယ် Servic နဲ့ Customer Care ထူးကောင်းမွန်ပြီး မကြာသေးမီက ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်ရဲ့ မိသားစု၀င် Customer အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ ဟိုတယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်က ဟိုတယ်တည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ Marketing အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို Digital ခေတ်ကြီးမှာ နောက်မကျလေရအောင် ၀န်ဆောင်မှုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Bagan Htete Htar Hotelမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ Service တွေကတော့…
Professional Market Photos
Drone Photos and Footage
Direct Booking from Website အစရှိတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့လဲ လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် Digital Marketing ခေတ်မှာ ရှေ့ပြေးနေစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်ရဲ့ Customer မိသားစုထဲကို ၀န်ရောက်လိုပါက အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..
A creative agency in Mandalay. Providing the best web design and development, SEO, Digital Marketing and Branding services since 2013.
တရုတ်ပြည်ရဲ့ Great Firewall ကိုအာဏာသိမ်းအစိုးရက အသုံးပြုခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
Client Showcase: Heffeyskincare
Business Email for 1$
Start talking with us to launch your new ideas into reality.
Call Us Now! +959770126660
We areacreative agency in Mandalay providing the best web design and development, SEO, Digital Marketing and Branding services since 2013.
© 2022 Zeagwat, Inc. Some rights reserved.
Made with ❤ in Mandalay.